Ubomi be-Explorer uChristopher Columbus
Ingxelo kaChristopher Columbus
by Amanda Briney
I-Biography ye-Explorer of the Americas
UChristopher Columbus wazalelwa eGenoa (e-Italy namhlanje) ngo-1451 ukuya kuDomenico Colombo, weever, kunye noSusanna Fontanarossa. Nangona encinane iyaziwa ngobuncinane bakhe, kuyacaca ukuba wayefundiswe kakuhle kuba wayekwazi ukuthetha iilwimi eziliqela njengomntu omdala kwaye wayenolwazi oluninzi lweencwadi zakudala. Ukongeza, wafunda imisebenzi kaPtolemy noMarinus ukubiza ngambalwa.
UColumbus waqala ukuya elwandle xa wayeneminyaka eli-14 ubudala kwaye oku kuqhubeka ubomi bakhe obutsha. Ngethuba le-1470, wahamba ngeendlela ezininzi zokurhweba ezamthabatha waya e-Aegean Sea, eYurophu yaseNtlabathi, kwaye mhlawumbi i-Iceland. Ngo-1479, wadibana nomntakwabo uBarolomeo, umenzi wemaphu, eLisbon. Kamva watshata noFilipa Moniz Perestrello kwaye ngo-1480, unyana wakhe uGeorge wazalwa.
Intsapho yahlala eLisbon kwaze kwaba ngo-1485, xa umfazi kaColumbus efa. Ukusuka apho, uColumbus noDiel bathuthela eSpain apho waqala ukuzama ukufumana isibonelelo sokuphanda iindlela zokuthengisa zentshona. Wayekholelwa ukuba ngenxa yokuba umhlaba wawuyingingqi, iinqanawa zazingena kwiMpuma Ekude kwaye zenze iindlela zokurhweba e-Asiya ngokuhamba ngentshonalanga.
Kwaphela iminyaka, uColumbus wacebisa izicwangciso zakhe kubabukumkani basePutukezi nabaseSpain, kodwa waphenduka rhoqo. Ekugqibeleni, emva kokuba amaMorho axoshwe eSpain ngowe-1492, uKumkani uFerdinand noKumkanikazi u-Isabella baphinda bacela izicelo zakhe.
UColumbus wathembisa ukubuyisela igolide, iziqholo kunye nelikalika evela e-Asiya wasasaza ubuKristu, kwaye ahlolisise iChina. Emva koko wacela ukuba abe ngummangaliso wezilwandle kunye negunya lala mazwe athobileyo.
Uhambo lukaColumbus lokuqala
Emva kokufumana inkxaso ebonakalayo evela kumakhosi aseSpeyin, uColumbus wahamba ngomkhombe ngo-Agasti 3, 1492, kunye neenqanawa ezintathu, iPinta, Nina, neSanta Maria, kunye namadoda angama-104.
Emva kokumisa okufutshane kwiiCanary Islands ukuba uphinde ulungise kwaye wenze ukulungiswa okuncinci, iinqanawa zivela ngaphesheya kwe-Atlantic. Olu hambo lithatha iiveki ezintlanu - ixesha elide kunokuba uColumbus walindele, njengoko wayecinga ukuba ihlabathi lincinci kunelo. Ngelo xesha, amaninzi amalungu amalungu asebenza nezifo aze afe, okanye afe ngenxa yendlala nokunxanwa.
Ekugqibeleni, ngo-2 ngomhla we-Oktobha 12, 1492, uRodrigo de Triana, umhlaba ovelele kwindawo ye-Bahamas yamhla. Xa uColumbus efika ehlabathini, wayekholelwa ukuba kwakukho isiqithi sase-Asia waza wabiza ngokuthi iSan Salvador. Ngenxa yokuba akafumananga ubutyebi, uColumbus wagqiba ekubeni aqhubeke nokuhamba ngeChina. Kunoko, wagqiba ukutyelela eCuba naseApaniolaola.
Ngomhla kaNovemba 21, 1492, iPinta kunye nabasebenzi bayo bahamba bahlolisisa ngokwabo. Kwaye ngomhla weKrisimesi, uColumbus 'Santa Maria wadilika emdeni wase-Hispaniola. Ngenxa yokuba kwakukho indawo encinane kuNine, uColumbus kwafuneka ahambe malunga namadoda angama-40 ngasemva kwinqanaba ababizwa ngokuba yiNavidad. Kungekudala emva koko, uColumbus wahamba waya eSpeyin, apho wafika khona ngoMatshi 15, 1493, wagqiba uhambo lwakhe lokuqala entshonalanga.
Uhambo lwe sibini lukaColumbus
Emva kokuphumelela kokufumana eli lizwe elitsha, uColumbus wabuya waya ngasentshonalanga ngoSeptemba 23, 1493, kunye neenqwelo ezili-17 kunye namadoda ayi-1,200.
Injongo yalolu hambo kwakukukumisela iikoloni egameni laseSpain, khangela i-crew e-Navidad, kwaye uqhubeke nokufuna kwakhe ubutyebi kwinto awayecinga ukuba yiMpuma Ekude.
NgoNovemba 3, amalungu asebenzayo awabona umhlaba waza wafumana iziqithi ezintathu, iDominica, iGuadeloupe neJamaica, eyayicinga ukuba uColumbus yayiziqithi zaseJapan. Ngenxa yokuba bekungekho ubutyebi apho, bahamba baya e-Hispaniola, bafumanisa ukuba inqaba yaseNavidad yachithwa kwaye abasebenzi bakhe babulala emva kokuphatha kakubi abantu bomthonyama.
Kwiziko leqonga uColumbus wasungula i-coloni yaseSanto Domingo kwaye emva kokulwa ngo-1495, wanqoba isiqithi sonke sase-Hispaniola. Emva koko wahamba ngomkhumbi waya eSpain ngo-Matshi 1496 waza wafika eCadiz ngoJulayi 31.
Uhambo lukaThathu lukaColumbus
Uhambo lwesithathu lukaColumbus lwaqala ngo-Meyi 30, 1498, waza wathatha umzila ongaphezulu osezantsi kunasezantsi ezimbini.
Esalindela iChina, wafumana iTrinidad neTobago, iGrenada, noMargarita, ngoJulayi 31. Waya kwilizwe laseMzantsi Melika. Ngo-Agasti 31, wabuyela e-Hispaniola waza wafumana indawo yaseSanto Domingo apho. Emva kokuba ummeli karhulumente athunyelwe ukuphanda iingxaki ngo-1500, uColumbus wabanjwa waza wabuyela eSpain. Wafika ngo-Oktobha waza wakwazi ukuzikhusela ngokufanelekileyo malunga neentlawulo zokunyanga abahlali baseSpain nababi.
UColumbus 'Owesine kunye noThutho lokugqibela nokuFa
Uhambo lukaColumbus lokugqibela lwaqala ngoMeyi 9, 1502, waza wafika e-Hispaniola ngoJuni. Emva koko, wayenqatshelwe ukuba angene kwi koloni ukuze aqhubeke ephinda ahlolisise. NgoJulayi 4, wahamba ngomkhumbi waza kamva wafumana iPentral America. NgoJanuwari 1503, wafika ePanama waza wafumana ixabiso elincinci legolide kodwa wagxothwa ngaphandle kwale ndawo ngabo bahlala khona. Emva kweengxaki ezininzi kunye nomnyaka wokulinda eJamaica emva kokuba iinqanawa zakhe zinenkathazo, uColumbus waya eSpeyin ngoNovemba 7, 1504. Wafika apho, wahlala kunye nendodana yakhe eSeville.
Emva kokuba uKumkanikazi u-Isabella afe ngomhla kaNovemba 26, 1504, uColumbus wazama ukubuyisela ulawulo lwakhe lwe-Hispaniola. Ngo-1505, ukumkani wamvumela ukuba enze isicelo kodwa akazange enze nto. Emva konyaka, uColumbus wagula wafa ngoMeyi 20, 1506.
Ngenxa yokufumanisa kwakhe, uColumbus udlalwa kwiindawo ezijikeleze ihlabathi, kodwa ngokukodwa kwimimandla yaseMerika egama lakhe kwiindawo (njengeSithili saseColumbia) kunye nokubhiyozela uSuku lweColumbus njalo ngonyaka ngoMvulo wesibini ngo-Oktobha.
Nangona kunjalo, lo mbuso, uColumbus wayengesiye wokuqala ukutyelela iiMelika. * Igalelo lakhe elikhulu kwiijografi kukuba nguye owokuqala ukutyelela, ukuhlalisa, nokuhlala kule mihlaba emitsha, ngokuzisa ngokufanelekileyo indawo entsha okanye ihlabathi phambili kwengcamango yelo xesha.
* Kwakude ngaphambi koColumbus, izizwe ezahlukahlukeneyo zasihlala kwaye zihlola indawo ezahlukeneyo zaseMerika. Ukongeza, abaphandi baseNorussiya bavakashele iinxalenye zaseMntla Melika. ULeif Ericson ukholelwa ukuba wayengowokuqala waseYurophu ukutyelela ummandla kwaye wamisa indawo yokuhlala kumntla weNewfoundland eCanada kwiminyaka engama-500 ngaphambi kokufika kukaColumbus.
Umthetho wobuKoloni ePeru
Biography ka-Alexander von Humboldt
U-Eratosthenes - uYise weJografi
INkosana uHenry Navigator
Istanbul Yakuba Kanye iConstantinople
URobert Cavelier de la Salle
Ithempeli likaArtemis e-Efese
Ungcoliseko lweLake: Iintlobo, iMithombo kunye neZisombululo
Iindawo eziPhezulu zoLuntu
Okwaneleyo namhlanje - IsiLilo 3: 22-24
Ukubhala iingoma ezingcono: Icandelo II - Ukubhala kwiiNcinci ezincinci
I-Amberjack - Umhlobo weCopter's Friend
Yintoni eyenzekayo xa iPaint yeOyile isela?
Ngaba Amapuphu Asela Amanzi Olwandle?
Umoya Ongcwele Wabuya Ngakanani Kubapostile?
Kutheni "u-Anne weGreen Gables" Unako ukuphefumlela iNcwadi eDlulileyo kakhulu kwiMbali
I-Red Algae (iRhodophyta)
I-Stetson University Photo Tour
Funda nge-Hand Hamsa kunye Nokuba ziphi na iimpawu
Iifom ye-5 ifowuni ye-Estados Unidos and su pasaporte
Iimpawu zeSignity Key
Ukuchaza iingubo ezimbini zokuthi 'ibhola ibetha' eGoli
"Umphangi" - Inyaniso kunye neFiction
Ngubani Othi "Veni, Vidi, Vici" kwaye Wathini?
Yintoni uMqulu weComment & Chemical Composition of Blood?
12 Iimfundiso zeBhayibhile ezikhuthazayo malunga neMidlalo
Indlela yokuyiKhaya kwakho ngeFeng Shui
Buyela kwihlobo le-2016 ngokuSigubha NgeeNgoma ezi-10 ze-Rap
Ngaba Uxilisa 'Ngomncedisi'? Bese usebenzisa i-French Subjunctive